Ku darida Mobilada Istaraatiijiyada Xayeysiinta Bannaanka | Martech Zone
Suuq-mobile ayaa soo ifbaxaysa oo noqotay wax iska caadi ah maalin kasta. Toddobaadkii hore waxaan booqanayay qoys deggan aagga Myrtle Beach waxaanan arkay boodhadhkan. Waxay ahayd wax aad u wanaagsan in la arko soo jiidasho weyn oo moobaylka ku dhexjirta istiraatiijiyadooda suuq geynta guud.
Doug wuxuu leeyahay isdhexgal moobil oo lamid ah boggiisa, waad awoodi kartaa qoraalka MartechLOG illaa 71813 heshidna heegan markuu wax soo diro! Waan gooyay shortcode sawirkaan ka baxsan si aan qofna ugu dhicin inuu qoraal u diro (waxay ku kacaysaa lacag xayeysiiyaha).
Tani runti ma ahayn boodhadhka kaliya ee aan ku arkay is-dhexgalka suuq geynta moobiilka. Waxaan arkay dukaan rashka oo ku weydiinaya adiga ku qor “BANG” lambar gaaban dalab gaar ah, sidoo kale!
Isku darka farriimaha qoraalka iyo boorarka, Ripley's Aquarium:
Hadda awood u leh inuu la socdo waxtarka boorarka.
Raadraaci karaa inta xiisaha xiisaha cusub abuuraysa.
Waxay soo bandhigtay lakab cusub oo isdhexgal ah macaamilka.
Muuqaal kale oo qabow oo lagu dari karo tan ayaa ah awooda lagu baraarujinayo xayeysiiyaha oo loo siiyo nambarka mobiilka ee macaamilka. Qiyaas inaad qoraal u dirto Ripley's Aquarium dalabkeeda isla markaana daqiiqado yar ka dib wakiil ayaa ku soo wacaya oo ku weydiinaya haddii aad wax su'aalo ah qabtid!
Tani waa tusaale aad u wanaagsan oo ku saabsan sida is-dhexgalka moobilku u kobcin karo xeeladaha xayeysiinta bannaanka ee jira. Maxaad ku sameyneysaa moobilka?
Tags: xayeysiiska biilashamarketing mobileadvertising dibaddaSMSfariin qoraal ah
Dhammaantood waxay ku saabsan yihiin Xeerka Dib Loo Isticmaali karo? er… Mawduuc
Jul 16, 2009 markay ahayd 2:11 AM
Tani waa tusaale wax ku ool ah oo ku saabsan sida warbaahinta dhaqameed ay u qaadan karaan tikniyoolajiyad cusub una sii jiri karaan. Waxay iga dhigaysaa inaan la yaabanahay waxa istiraatiijiyadaha kale ee warbaahinta ee dhaqameed ay nolol cusub ka heli karaan isticmaalka mobilada iyo teknoolojiyadaha kale ee warbaahinta.
Waad ku mahadsan tahay qoristaada!
Jun 14, 2012 at 5: 32 PM
Maqaal cajiib ah, waa mid aad u ballaadhan oo xiiso leh! waa sidaas
waxtar ii leh, iyo websaydhkaaga ayaa aad u wanaagsan. Xaqiiqdii waan wadaagayaa
URLkan saaxiibaday. Kaliya ayaa calaamadeeyay boggan. Xayaysiinta bannaanka